Izesekeli ezi-20 ezihamba phambili zokugaya zango-2021 - Ukudla
Izesekeli ezingama-20 zokosa ezenza kakhulu ukupheka kwangaphandle kube lula kakhulu (ne-Tastier)
20 Grilling Accessories That Seriously Make Outdoor Cooking Much Easier
Okwakho ribeye kunongwe, futhi ama-grates ayashisa — wamukelekile enkathini yokosa. Ukwenza i- izikhathi zokupheka zangaphandle kujabulise nakakhulu kuleli hlobo, kungani unganikeli i- i-grill setha iMTV Izinkalankala ukwelashwa? Kusuka kuma-spatula kuya kuzitsha ze-sizzle, nazi izesekeli ezingama-20 zokugaya ongazithatha isoso sasemuva ezingeni elilandelayo.
OKUSHIWO: Ama-Recipes angama-67 amahle kakhulu okupheka nokudla lonke ihlobo
1. Thermapen Mk4
I-Thermometer efundwa ngokushesha esheshayo
I-thermometer ibalulekile ekubetheleleni ukushisa nokunikela kwama-steaks aphakathi nendawo, ama-burger anamanzi nakho konke okuphakathi. IThermoworks Thermapen iyintandokazi evunyelwe ngumpheki futhi izonikeza ukufundwa okunembile ngemizuzwana emibili kuya kwemithathu. Uhlobo lweMk4 lunokukhanya kwangemuva okuzenzakalelayo ukuze ukwazi ukosa kuze kube sebusuku, futhi.
Ufunda amazinga okushisa ngemizuzwana
Ukunemba okuphezulu (± 0.7 ° F)
Ihambisana nezinto eziningi zokosa, ukupheka nokubhaka
Kubiza kakhulu kunamanye ama-thermometer
Idizayini ephathwa ngesandla idinga ukuhlolwa kwethempeli njalo
Ithenge ($ 99; $ 69)
2. I-Thermometer ye-Alamu elula ye-DOT
Khipha ku-internet Probe Thermometer
I-thermometer ephathekayo ephathekayo iyadingeka ekhishini, kepha i-thermometer ye-probe ene-alamu ingukuthuthuka okuhle kokuthosa. Ikhebula elingamelana nokushisa okungama-intshi angu-47 lisho ukuthi ungafaka iphenyo, uvale isembozo se-grill bese uqapha ukushisa kwebrisket yakho ngenkathi ibhema. Ungasetha ne-alamu yokushisa ekhonjiwe ukukuxwayisa lapho kwenziwa i-pièce de ristance yakho.
Ikhebula probe lokufundwa kwezinga lokushisa ngezandla
I-interface elula kulula ukuyisebenzisa
Ingenazo izici zobuchwepheshe obuphezulu zemiklamo ebiza kakhulu
Ithenge ($ 45)
3. I-Grill Dog Cedar Grill Scraper
I-Grill Scraper ehamba phambili
Ngenkathi amabhulashi wensimbi eyinsimbi eyendabuko ye- ukuhlanza i-gunk kusuka kumagreyidi , laba basiki bomsedari banomphetho oyisicaba osebenza kahle futhi ngeke ishiye ngemuva izinsimbi zensimbi ye-steak sesh yakho elandelayo. Iscraper ekugcineni sizokwakha ama-grooves futhi sihambisane ne-grate yakho eyingqayizivele isimo.
Ayishiyi insimbi ngemuva
Izoguga ngokuhamba kwesikhathi
Abanye ababuyekezi baqaphela ukuqhekeka
$ 20 e-Amazon
4. I-OXO Good Grips 16-Inch Locking Tongs
Izilogo ezihamba phambili zokugcoba
Uma ugcoba, kunamathuba amaningi wokuthi uzofinyelela izigaxa kunoma iyiphi enye into. Ipheya elilayishwe entwasahlobo futhi elikhiwayo lifanelekile; indlela yokukhiya ithebhu ingcono nakakhulu. (Kulula ukuvula nokuvala uma ujikijela ezinye izinto futhi kuzohlala kukhiyiwe ngokuphephile.) Lezi zimbhangqwana ezingenazinsimbi zinakho konke lokho, kanye nokubambelela okuthambile, okungasheleli ezibambo, kanye ne-loop yokulenga yokugcina kalula.
Izinto eziqinile zensimbi engagqwali
Indlela yokudonsa yesitayela sokudonsa ihlala ikhiyiwe
Umshini wokuwasha izitsha uphephile
Abanye ababuyekezi bathola ubude bude kakhulu
Ithenge ($ 16)
5. I-OXO Good Grips Fish Turner
Siyazi, siyazi: Kubizwa ngokuthi yi-fish Turner, ngakho-ke kungani kungalungela enye into? Sizwe: Lolu hlobo lwe-spatula (imvamisa lwaziwa njenge-spatula yenhlanzi) lunobubanzi obubanzi nensimbi eguquguqukayo, onqenqemeni lwe-ultrathin olungangena ngaphansi kwanoma yikuphi ukudla kalula. Luhlobo lwethu oluyintandokazi lwe-spatula lwayo yonke imisebenzi, futhi le nguqulo ye-OXO iqinile ngokwanele ukosa.
Izimo kodwa ziqinile
Ithenge ($ 15)
6. I-Winco 11-Inch Aluminium Sizzle Platters
Isitsha Sizzle Esihamba phambili
Izitsha ze-Sizzle ziyimfihlo yokudlela egcinwe kahle yokudlela izitsha zokubilisa, ukufaka imise-en-ing nokufaka endaweni eyodwa. Amaphaneli e-aluminium amancane nje amancane, kepha aqhuba ukushisa kahle kakhulu futhi angathatha ukushaya. Gcina okumbalwa bese ukusebenzisela ukubamba amabhulashi wokugcoba, izinhlamvu zemali ezosiwe bese ubamba ukusikeka kwenyama.
Usayizi omncane ulungele ukugcoba imifino noma izingxenye ezithile
Sizogcina sibhidlikile futhi sashintsha umbala
$ 10 e-Amazon
7. Ama-Nordic Ware Naturals Half-Sheet Pan (Isethi 2)
Amapani Amashidi Ahamba Phambili
Ngaphandle kokuwosa imifino namakhukhi okubhaka, amapanishi amashidi angumngani omkhulu wompheki wokuthwala ukudla nezinongo ukuya nokubuya ekhishini, nokuphumula ukusikwa okukhulu kwenyama ngaphambi kokusikwa nokukhonza. Idizayini ebunjiwe yalezi zingxenye ze-Nordic Ware zombili zivimbela ukushuba ngokuhamba kwesikhathi futhi ibambe ama-juice angenaphutha.
Umklamo we-Rimmed ubamba ukudonsa futhi uvimbele ukugoqana
Kungaba inkinga ukuhlanza
Ithenge ($ 37)
8. Just Grillin 'Nonstick BBQ Grill Topper
I-Grill Pan Engcono Yokudla Kwasolwandle Nemifino
Imifino emincane kanye nama-filets ezintekenteke ezinhlanzi kunganamathela noma kwehle emaceleni e-grill, kepha ipani ye-grill iyakuxazulula lokho. Leli pani elingu-12-by-16-intshi aliyona induku futhi lingahanjiswa futhi lisuswe kwi-grill yakho, futhi liwashawashishi-liphephile ukuze lihlanzwe kalula.
Kwenza ukosa inhlanzi nemifino kube lula
ucaphuna emuva esikoleni
Abanye ababuyekezi bathi ukudla kunganamathela
Ithenge ($ 8)
9. I-Char-Broil Cast Iron Smoker Box
Ibhokisi Elibhemayo Elihamba phambili
Ngaphandle kokuthi ube nentuthu egcwele (asinayo), le gajethi yensimbi nesikhwama sezingodo kuyindlela yakho elandelayo yokufaka ukunambitheka okunothile, okubhemayo. Umane uwugcwalise ngokhuni oluthandayo, ukhanyise amachips bese uwuphumuza emagcekeni aseduze kokudla kwakho. Uma uvala isembozo se-grill, ubamba intuthu bese uphendulela i-grill ibe yintuthu yesikhashana.
$ 17 e-Amazon
10. Isibani Esikhokhelayo Esikhokhelwayo se-Energizer
Isibani sesibani sibalulekile ekugcobeni? Uma uhlela ukupheka ngaphandle ukushona kwelanga okudlule noma ngezikhathi ezingekho, ngakho-ke impela. Le iyakwazi ukugcwaliseka, ukumelana namanzi nokuguquguquka kwesayizi, ngakho-ke awusoze waba nezaba zokuthi ungafaki i-grill.
Iyashajeka futhi iyamelana namanzi
Abanye ababuyekezi bathi ibhethri alihlali isikhathi eside ngokwanele
$ 27 e-Amazon
11. Isiqalisi se-Weber Rapidfire Chimney Charter
Okuhamba phambili kwamalahle
Impela, ungasebenzisa uketshezi olulula ukukhanyisa i-grill yakho yamalahle (noma kungenjalo, linda ihora ukuze amalahle abambe), kepha ushimula uzothola umsebenzi ofanayo ngemizuzu engama-20 futhi ngaphandle kwamakhemikhali amnandi. Ukuyisebenzisa, thela amalahle akho owathandayo kudramu ye-aluminium, phezulu ngethawula lephepha eligcwele uwoyela bese ulikhanyisa. Voilà, amalahle ashisayo amhlophe.
Amalahle amalambu angenawo uketshezi olukhanyayo
Kungabhema lapho kuqala ukukhanyisa
Ithenge ($ 21)
12. IBoska Ceramic Pizza Stone
Kuhle Pizza Stone
Impela, ungasebenzisa ifayela le- itshe lokubhaka kuhhavini lakho, kepha bewazi ukuthi kusebenza ku-grill futhi? Thatha ubusuku be-pizza ngaphandle ngaleli slab le-ceramic le-12-by-15-intshi, elikhiqiza ama-crispy crusts njengendawo yokudlela oyithandayo. Siyawuthanda lo mklamo ngoba unomphetho owodwa onamarimu kanye nonqenqema olulodwa lwamahhala, ngakho-ke ungaslayida umsebenzi wakho wobuciko etsheni kalula (futhi ngaphandle kokwesaba ukuthi uzokuwa).
Grill-ephephile kuze kube 480 ° F
Futhi kusebenza kuhhavini
Yenza i-pizza yesitayela sehhavini lezitini ekhaya
Insipho yokugeza izandla kuphela
Ithenge ($ 35)
13. Ama-OXO Good Grips Ama-Skewers Wensimbi Engagqwali (Iqoqo le-6)
Amakhekhe amahle kakhulu
Yithi nje, noma ingabe ama-kebabs ajabula kakhulu? Yeqa ama-bamboo skewers avuthayo uthandele izinsimbi ezingaphinde zisebenze, ezingadingi ukucwilisa. Lezi zinomklamo oyisicaba, ngakho-ke ukudla ngeke kuzungeze lapho kuswidiwe.
Ithenge ($ 13)
14. I-OXO Good Grips Grilling Basting Brush
Ibhulashi elihamba phambili le-Basting
Ngokubhaka, sithanda ibhulashi le-boar-bristle, kepha ngokubhaka kuma-marinades nososo we-barbecue, i-silicone kulula ukuyihlanza futhi ngeke ibambe iphunga elimnandi. (O, futhi ngeke ivuthe umlilo.) Siyathanda ukuthi leli bhulashi linekhanda eli-angled, ngakho-ke ungaliphumisela ebusweni ngaphandle kokwenza isiphithiphithi ngokuphelele.
Okungenzeki ngephunga namabala
Ama-bristles amakhulu awakulungele ukubhonsa ngokunemba
15. Williams Sonoma Olivewood Salt Keeper
Indawo Engcono Kasawoti
Akunangqondo ukugcoba uma ungezukudla ukudla kwakho, ngakho-ke kungcono ukukugcina usawoti ngomumo. Njengoba i-shaker ingeke iyisike, sikhetha isela likasawoti ngezinongo nokufafaza okunomusa. Lo mklamo womuthi womnqumo unesivalo sokuphatheka futhi ngeke uphahlazeke uma wehla.
Luhlala Isikhathi Eside
Abanye ababuyekezi bathi amathiphu kalula
Ithenge ($ 30)
16. I-Unicorn Mills 6-Inch Magnum Pepper Mill
Khipha ku-internet Pepper Mill
Cishe kubaluleke njengosawoti izinongo, nopelepele omnyama omusha njalo indlela yokuhamba. Lesi ngesinye sezigayo zethu esizithandayo zikapelepele ngoba ziyashesha ngendlela eyisimanga futhi ziyakhothwa bushelelezi njengebhotela. Usayizi wokugaya nawo uyashintsha, futhi ukugcwalisa kabusha umoya.
Ukugaya okusheshayo, okulungisekayo
$ 50 e-Amazon
17. I-Wildwood Grilling Plill Sampler Pack (Isethi engu-5)
Izindawo ezihamba phambili ze-Wood Grill
Okwezinyama ezibhemayo kanye nokudla kwasolwandle (kanye nemifino) ngaphandle kwebhokisi lababhemayo noma lababhemayo, la mapulangwe ezinkuni enza umsebenzi wenziwe. Siyalithanda leli sethi — eliza nepulangwe elilodwa ngalinye lomsedari obomvu waseNtshonalanga, i-alder, i-maple, i-cherry ne-hickory — yokuzama ukosa ipulangwe lokuqala.
Ifaka ukudla okunambitheka okubhemayo
Kudinga ukulungiselela kusengaphambili
Ithenge ($ 26)
18.I-FiveTwo by Food52 Oven Mitts
Ama-Mitts ahamba phambili
Abashisayo abamenywanga kule-barbecue, ngakho-ke gcina amadijithi akho ethokomele futhi ephephile ngalawa ma-mitts asebenzayo e-oven. Zigcotshwe ngo-abicah (okungukushisa okuphephile kuze kufike ku-650 ° F) futhi aqukethe ozibuthe abayimfihlo abavumela ukulenga kunoma iyiphi insimbi.
Abicah ukushisa kuphephile futhi kuyashintsha
Izimpawu zikakotini akuphephile ukushisa
Ithenge ($ 40)
19. IHedley neBennett All Day Crossback Apron
Khipha ku-internet Grilling iphinifa
Ukumba ngaphandle kwe-apron kufana nokushayela ngaphandle komshwalense wemoto, futhi izingozi zihlala zenzeka. Lona linomklamo we-crossback wokugcina ukungezwani entanyeni yakho (futhi kuzolingana bonke osayizi), kanti indwangu esindayo inomelana namabala namabhodlela. Iphinde ibe namaphakethe amaningi kanye nethebhu eseceleni ehlakaniphile yokulengisa ithawula lesandla.
Kufanela bonke osayizi kahle
Ithenge ($ 95)
20. UJohn Boos & Co End Grain Maple Chopping Block
Ibhodi Lokusika Elihamba phambili
Uma udla i-alfresco, ubeka i- ibhodi lokusika uhlangothi lwe-grill lususa isidingo sokungena nokuphuma ekhishini. Leli bhodi le-maple elihle lokusanhlamvu lokuphela liwukutshalwa kwezimali ngokuqinisekile, kodwa lihlala isikhathi eside futhi limnene emimese yakho yasekhishini. (Vele ungayigcini ngaphandle.)
ama-movie aphezulu amahlaya omndeni
Kuhle futhi kuqinile
Kudinga ukuthanjiswa njalo
Ithenge ($ 206)
OKUSHIWO: Izidlo zakusihlwa ezingama-90 ezilula ezizothandwa yiwo wonke umuntu
uwabuka kanjani ama-movie online
kumele ubuke ama-movie azizwe kahle
kulula ukwenza ukudla okulula
leo ukuhambisana nezinye izimpawu
amaprotheni eshadini lezithelo